आर्थिक सम्बृद्धिको सपना
बिश्व ब्रह्माण्डमा अवस्थित नेपाल स्वभिमानी देश हो । नेपाल प्र्राकृतिक स्रोत बाहेक विश्वमा शान्तिको स्रोत पनि हो । यी वाक्यांसहरु बाहेक नेपालीको जन मस्तिष्कमा विभिन्न प्रश्न उब्जिन्छन किन नेपाल बिश्वको तुलनामा आर्थिक रुपले पछाडि छ ? के नेपाल चाडै बिकसित हुन्छ ? के सिगांपूर, मलेशिया, यु.ए.ई., कतार पहिले देखि सम्बृद्ध थिए ? के नेपालमा मोनोरेल, पानी जहाजको सपना चाडै पूरा हुन्छ ? बिश्वको लगभग एक तिहाइ जनसंख्या बौद्ध धर्मावलम्बीको केन्द्र लुम्बिनी पर्यटकिय क्षेत्र विश्वको अरु ठाउँ जस्तो बिकसित हुन्छ ? यी विभिन्न प्रश्न जन जनको मन मस्तिष्कमा पैदा हुन्छन ।
लगभग तीन चार दशक पहिले नेपाल जस्तै खाडी मुलुकहरु मलेशिया, यु. ए. ई., कतार इत्यादि देशहरु नेपाल जस्तै थिए । तर आजको यी खाडी मुलुकहरु छलाङ मारिरहेका छन भन्ने कुरा हामीलाई अवगत नै छ । आजको मलेशिया आर्थिक रुपमा विश्वको ज्ञद्ध स्थानमा छ । मलेशियाको जिवनशैली सिगांपूर, ब्रुनाइ, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरुको मानक जस्तो छ । हिजो अस्ति जुन ठाउँमा बालुवा थियो त्यहाँ आज गगन चुम्बी भवन देख्न सक्छौ । सन् द्दण्ज्ञड को एक संस्थाको सर्वेक्षण अनुसार सिंगापुर, हंङकंङ र न्यूजिल्यांन्ड पछि लगानी सुरक्षामा मलेशिया रहेको छ । त्यहाको कूल जनसंख्याको ज्ञज्ञ।ज्ञ प्रतिशत मात्र कृषिमा आधारित छन् । तर नेपालमा टठ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा अधारित छन् । तैपनि बर्षेनी करोडौको खाद्यान्न भारतबाट मगाउनु पर्दछ । मलेशियाको विकासको आधार स्तम्भ महाथिर मुहम्मद हून् । फेरि पनि हाम्रो मनमा विचार उत्पन्न हुन्छ, कहिले नेपालमा महाथिर मूहम्मद, लिक्वान यु जस्ता व्यक्तिहरु जन्मिन्छन् ? ताकि नेपाल पनि ती देशहरु जस्तै तीव्र गतिमा बिकसित होस ।
सिगांपुर पनि लगभग चार दशक पहिला नेपाल कै जस्तो अवस्थामा थियो । तर लिक्वानको सत्तामा उदय पश्चात त्यहां को आर्थिक अवस्थामा कायापलट भयो । इस्वी सम्बत जुन ज्ञट,ज्ञढटघ मा वृक्षारोपण (बगैचाको सपना) देखि टेक्नोलोजि क्रान्ति हुदैँ आर्थिक सम्बृद्धिमा पुर्याउने श्रेय लिक्वानलाई जान्छ । विभिन्न काममा स्वंयम संलग्न भई सिगांपुरको आर्थिक सपना पुरा गर्नुभयो । आज सिगांपूरको पर क्यापिटा आम्दानी बिश्वको अग्रणी स्थानमा छ । यहाँको कुलजनख्याको ०.९६ प्रतिशत मात्र कृषिमा आधारित छन्। तै पनि खाद्यान्नमा राम्रो छ । आजको सिगांपूर कृषि प्रविधि ,जैविक प्रविधि इत्यादिमा उच्च अवस्थामा छ ।
यसै गरी कृषि क्षेत्र को हबको रुपमा इजरायल धेरै अगाडि गइसकेको छ । नेपालमा पनि बिशेष गरेर कृषि, पर्यटन, जलबिधुत, जडिबुटिमा जोड दिएर देशको सम्बृद्धि को यात्रामा लम्किन सक्छ, भन्ने प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालमा लगभग ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित भएपनि मलखादको पटक पटक अभाव हुने गर्दछ ।
नेपाल यदि कृषिमा अगाडि बढयो भने नेपालको खाद्यान्न समस्या समाधान हुन्छ र करोडौ पैसा देशमा नै लगानी हुन्छ । नेपालको जि डि पी वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत छ । अब नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्ने समय आईसकेको छ । यदि देशको सम्बृद्धि चाहियो भने कृषि क्रान्तिमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा यदि लुम्बिनीको सौन्दर्यकरण भयो र विश्वमा जनजनको मन मष्तिष्कमा महत्व बताउन सक्यो भने आजको भन्दा दोब्बर पर्यटक भित्राउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा बिश्वको कुनै पनि बिकशित देश ठुला, ठुला प्रोजेक्ट बिदेशी ठेकेदार लाई दिएर भएको छैन । हामी हेर्ने हो भने दक्षिण कोरिया पनि विकसित थिएन । तर त्यहाँ जतिपनि ठुला प्रोजेक्ट थिए ती सवै आफ्नै जनताको श्रमबाट वनाए । दक्षिण कोरिया आज एउटा शक्ति बन्ने धावनमार्गमा छ । त्यहि भएर नेपाल पनि यि देशहरुबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । नत्रभने नेपाल स्वीटजरल्यान्ड नबनेर नर्कल्यान्ड बन्न बेर छैन । यो विचार को मनन गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।
बलिराम गुप्ता (नवलपरासी जिल्ला प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं. ९, पजरकटी घर भएका लेखक विकास, सम्बृद्धि र शिक्षा सम्बन्धी बिषयमा कलम चलाउँछन । साथै उनी राजनितिक विश्लेषक पनि हुन ।)
२०७६-असार-१ गते प्रकाशित